प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरे के हुन्छ ? – Hotpati Media
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरे के हुन्छ ?
१७ असार २०७७, बुधबार ०६:०९ मा प्रकाशित (1 हप्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि कुनै नाटकीय प्रस्ताव नल्याए पार्टी स्थायी कमिटी सचिवालयले उनको राजीनामा माग्ने निश्चितप्रायः भएको छ । तर, पार्टीको निर्देशन ओलीले सहजै परिपालन गर्नेमा राजनीतिक विश्लेषक सहमत छैनन् । बहुमत सदस्यको निर्देशनपछि पनि ओलीले राजीनामा नदिए के हुन्छ ? प्रस्ट तस्बिर अझै खुलेको छैन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।